अभागीको हद ! एउटै व्यक्ति’लाई मलेरिया, डेंगु र कोरोना ! उनैलाई कोब्रा-सर्पले पनि टोक्यो…हेर्नुहोस् । – yuwa Awaj
अभागीको हद ! एउटै व्यक्ति’लाई मलेरिया, डेंगु र कोरोना ! उनैलाई कोब्रा-सर्पले पनि टोक्यो…हेर्नुहोस् ।
मंग्सिर ८, २०७७ सोमबार 2
एजेन्सी : मानिस अभा’गी हुने पनि हद हुन्छ । तर, एक जना व्यक्ति लाई उनको खराब भाग्यले अझै पिछा छोडेको छैन । उनले लगातार पी’डामाथि पी’डा खेपी रहेका छन् ।
च्यारि’टीको काम गर्ने यी बेलायती नाग-रिकले कोरोना-भाइरस, डेंगु र मले-रियालाई जिते ।तर, उनलाई फेरि सर्पले टो:क्यो । अहिले उनी सम्भा’वित घा’तक सर्पको डसाइको उप-चार गराएर स्वास्थ्य लाभ गरि रहेका छन् । उनी अहिले भार’तको राज;स्थानमा छन् ।
इयान जोन्स नामका ती व्यक्तिलाई भारतीय गोब्राले राज’स्थानको जोध’पुरमा हुँदा टोकेको र उनी जोध:पुरमै एक अस्पतालमा उप’चारका लागि भर्ना भएको समाचार एजेन्सी एए.फपीले जनाएको छ । ‘गाउँमा सर्पले टो’केपछि जोन्स हामी’कहाँ गत हप्ता आएका हुन् ।
सुरुमा हामी’ले उन लाई को’भिड–१९ पनि भएको (दोस्रो पटक) आशंका गरेका थियौं तर को’भिडको नतिजा भने नेगेटिभ आयो’ जोन्सको उपचार गरेका स्था’नीय मेडि’पल्स अस्प’तालका डा. अभिषेक तातरले एएफपीसँग भने ।
‘हामी;कहाँ आइ पुग्दा उनी होसमै थिए र उनीमा सर्पले टो’केको लक्षण देखि’एको थियो । उनको दृष्टि धमिलो भएको थियो र हिँड्न क’ठिन भएको थियो । तर, यी सा’मान्यतया अस्थायी लक्षण हुन्’ डा. तातरले थपे । जोन्स लाई अस्पतालबाट भने डिस्चा’र्ज गरिएको छ ।
हामीलाई अब कुनै लामो समयसम्म रहने असर हुँदैन भन्ने भए+पछि डिस्चा’र्ज गरेका हौं । उनी ठिक भइसकेका छैनन् भने पनि अबका केही दिनमा पूर्ण ठिक हुन्छन्’ डा तातरले भने ।
जोन्स लक’डाउन-भन्दा ठिक अघि भारत आएका थिए । लगत्तै लक’डाउन भयो । लक’डाउन पछिको अव’धिमा जोन्सले मले’रिया, डेंगु, कोरो’नाभा’इरस र स’र्पको ड’साइ सहि सकेका छन् ।डिसीनेपाल
Prevटिकटकमा भाइरल बन्दै रमेश र कल्पनाको जोडी- रमेशले कल्पना बारे यस्तो भन्छन् …हेर्नुहोस् ।